Esikhundleni sengilazi ku-iPhone ngeti-5 kuya ngezandla zabo - inqubo ukuthi iyathakazelisa abanikazi abaningi "yablokofona". Iphuzu lapha yilona zibiza kakhulu ukusebenza ngenxa zenkonzo yalo izikhungo ukushaja ezimbalwa. Kungani kubalulekile ukushintsha ingilazi obulimele? Ukubuyiselwa ingilazi zokuzivikela ku-iPhone ngeti-5 kuya kuzodinga ukuze kuvikelwe yezingxenye yangaphakathi zedivayisi. Uma imifantu esibukweni, ingozi hardware iyakhula.
Yini okudingeka siyenze?
Ukubuyiselwa ingilazi zokuzivikela ku-iPhone ngeti-5 kuya - kuwumsebenzi odinga isineke edinga umsebenzisi uqhuba ukusebenza ngangokunokwenzeka okuhlushwa focus. Yingakho kufanele uzilungiselele kusenesikhathi zonke amathuluzi kungadingeka esikhathini esizayo esiseduze, ngesikhathi esifanele ngaphandle kokuphazamiseka ngo trifles. Lena ngokuyinhloko ingilazi entsha.
Kumele 'lawa athengwa ezitolo ezikhethekile. Sikhuluma mobile phone ezitolo. Yebo, kungase kube ukuhluka kusuka ku-intanethi endalini site, kodwa udinga ukuba izinga ingozi ukuze uthenge le ingxenye penny Isaphulelo? Asinakukwenza lokho. Ikakhulukazi uma iPhone. Ukuze ususe kuphela ingcina liyadingeka. Napkin Ukugunda ukususa streaks, okuyinto izohlala ingilazi. Susa izingcezu uzodinga plastic abanye ngento ezicijile. Ngomqondo onabile, ungasebenzisa ukufakwa kokumqoka kuphela salokhu.
Kungenzeka yini ukuba nesikhathi?
Yomiselela izindlu kanye ingilazi iPhone 5S, njengoba kushiwo ngaphambili - yinqubo onzima futhi isikhathi esiningi. Kodwa zingancishiswa. Nokho, kufanele kuqondwe ukuthi kuleli cala kukhona ingozi ephansi izinga esikhundleni. Kodwa lapho ngiqala ukukhuluma ngakho, kubalulekile ukuqhubeka. Ukushintshwa kwamajoyinti esheshayo, sebenzisa dryer izinwele. Bona kulungele ingilazi. Awudingi ukwenza ukushisa kakhulu. Ngemva kwalokho, sisebenzisa into ezicijile plastic ukususa ingilazi ubudala ku izingcezu ezincane.
Sishilo kakade ukuthi, ngaphambi kokuqala ukufaka ingilazi entsha, kufanele nginilungisela indawo ukusebenza. Kuyinto efiselekayo ukuba sifeze inqubo phezu bushelelezi ezingeni ebusweni. Ngenxa yalesi itafula ekahle, isibonelo. Ebusweni kungenzeka eminye walala ngendwangu obukhulu. Lokhu kuzosiza ukunciphisa ukushelela ifoni. An ibhonasi wanezela kuyinto izibani okuhle.
Isinyathelo One. Mahhala module
iPhone 5S yokulungisa (esikhundleni ingilazi kuleli cala) ngeke akwenze ngaphandle isilinganiso esinjalo, njengoba ukukhululwa isilinganiso 'kalowo' - Screen mojuli. Kuze kube yimanje uyasikrufulula ngezikulufo, okuyinto zitholakala ezansi ifoni. Kufanele kube ezimbili. Phawula indawo kungaba egama-isixhumi. On the ingilazi zokuzivikela setha sucker-remover. Positioning kufanele sibe seduzane inkinobho Ekhaya. Ngomzamo omncane nje donsa esiyingini, esemgwaqweni ngaphambili iyunithi. Akubalulekile nje ukusebenzisa eqile. Phakathi ingilazi futhi engxenyeni engezansi uzimele umzimba kufanele uphushe ngokucophelela into mncane. Uma umugqa inothi ngokuhlukana, ukususwa amaswidi kufanele kwaqina. Ngakho kubalulekile ukuba ngixhumane imfucuza ingilazi ukunyakaza esilufifi ngosizo, isibonelo, ka ikhadi lepulasitiki.
Kulesi sigaba, qaphela kakhulu, ngoba abantu abaningi abazi ukuthi amashwa kwenzeka lapha. Imiphumela ingaba ebuhlungu, njengoba uchwepheshe ezineshwa kalula aphule uxhumano loop inzwa. Futhi, yena, okuhlanganiswe ngayo Ukhiye Wasekhaya. Yomiselela iPhone 5S ingilazi kwesikrini onezici ezithile. Ukuqhubeka sinyathelo ukhiphe biosensor isixhumi. It ixhunywe umbadlana. Ngokushelela abela module, noma kunalokho ingxenye yalo ephansi, ukuze emaphethelweni engenhla kwesokunxele endaweni lapho yayikhona ngaphambi.
Isinyathelo Sesibili. iyunithi ukuqaqa
Esikhundleni sengilazi ku-iPhone ngeti-5 kuya kuzodinga unwinding nezikulufi ezengeziwe. Basuke basonta ekhoneni eliphezulu kwesokudla, kukhona ezine izicucu zabo. Ngalezi nezikulufi ikhava zokuzivikela agcinwe endaweni. Ngemva kokususa le ngxenye, ungathola pads uxhumano loops ezithile. Le module nathi futhi kufanele adiliza. Ukuze wenze lokhu, ngomusa ukuvimbela nezixhumi uxhumano (kuyoba bobathathu) kusuka ekhadini yefoni. Uma kwenziwa kahle, kungenziwa bazitshela ukuthi iyunithi Ukudilizwa kuphumelele.
Isinyathelo ezintathu. Setha "into entsha"
Kulesi sigaba iphela ingilazi esikhundleni iPhone 5S. Ngaphambi unamathisele ingxenye entsha, kufanele ifakwe. Udluliselwa entsha module microphone kanye yokuxhuma ye-ke. Kodwa kuyobe kusekhona idivayisi ukukhanya inzwa ikhamera samanje futhi phambi. Metal Uhlaka kanye Ikhaya ukhiye ngesikhathi sokuhambisa eceleni. I element yokuxhuma ixhunywe ezikhumulweni zabo. Abeke isihlangu phezulu. Lungisa usebenzisa ngezikulufo ezine ukuthi iboshelwe ngaphambili. Uzimele ukubeka emuva iKhabhinethi nensika yalo. Nokho, ukuhlanganiswa ukwenza kusuka phezulu kuya phansi. Ezansi kakhulu ekupheleni twirl nezikulufi ngokuba yasibamba sokugcina module OSD. Wonke amawindi esikhundleni ku-iPhone ngeti-5 kuya esiphethweni.
Esikhundleni sengilazi - ngaso sonke isikhathi isinyathelo wemfanelo. Ngakho kudingeka sibonise ukunemba esiphezulu.
Ngisho uma ukhipha ingilazi shards ubudala kuthathwa iphutha elibi ngempela. Lokho kuyoholela yokuthi isibonisi lilimele. Ngakho-ke, ukulungiswa ngeke ngokuzenzakalelayo, akhuphuke. '
Glue kanye kuphela futhi kufanele ukwazi ukusebenzisa ngoba, kwezinye izimo, isicelo engalungile kuzokwenza nemiphumela emibi.
Uma umsebenzisi ukungabaza ukuthi lokhu kusebenza ngokuzimela uphendukisa ngaphandle imiphumela emibi, kungcono ukuxhumana yesikhungo futhi ukhokhe imali, kodwa ukuba azethembe hhayi sikhathazeke izinga.
Singakanani ngeke Kubiza ukulungisa?
Intengo libonisa entsha iPhone 5S akulona inani esinqunyiwe. Izindleko iyahlukahluka kuye ngokuthi umenzi, amasheya kanye neminye imingcele. Kunoma ikuphi, uwe ngaphakathi kobubanzi ruble 2 kuya kwezingu-4. Lapha nazo zathonywa umbala ukuguqulwa idivayisi module nokunye. Akekho akusho ukuvala amathuba ekuzuzeni amakhophi Chinese. Nokho, yini okufanele ukhathazeke ngakho ukuphepha isibonisi kanye ne-smartphone, kufanele ukuthenga ingilazi yasekuqaleni. Izokubiza ngaphezulu kuqhathaniswa namanye amamojuli imali eningi, kodwa ulungisisa imali wachitha.
Design izici module isikrini - a twin izingxenye ketshezi-crystal, ingilazi zokuzivikela futhi element inzwa, elihlanganiswa zibe munye uhlelo enobunye. Uma ufuna ukuhlukana ibe izingxenye, imishini ekhethekile ingasetshenziswa iwukudambisa glue. Uma kungenjalo, khona-ke into onomqondo enze akunakwenzeka ukuba aphumelele. Okungenani, ngaphandle kokubukela phansi ingxenye.
Lokhu "isangweji lobuchwepheshe" ngobunono uhlukanise usebenzisa nje ngokurhaba amakhambi ekhaya bengayi. Le nqubo yokuzihlukanisa ukulandelana okudla isikhathi imisebenzi. Nokho, kukhona maphutha. Kuyinto okuhlangenwe nakho. Uma umsebenzisi ngaphambilini ukubhekana nalezi zinto, ngokuqinisekile kumelwe ukuba wazi ukuthi yini engenziwa ukuhlukanisa uhlelo ibe izingxenye. Kungenjalo-ke kuyadingeka ukuba ashiye konke njengoba sinjalo.
Ekuphetheni, isihloko kungashiwo ukuthi isinyathelo esinzima kakhulu kungenzeka owokuqala, ngoba kukhona kudingeka unhook ngokucophelela Uhlaka iKhabhinethi. Futhi ukwenza kube o lula kangaka. Ikakhulukazi uma umsebenzisi ubhekene udingeka kangaka okokuqala.
Smartphone Acer Liquid E700. Izibuyekezo ze-smartphone Acer Liquid E700 (Black)
Indlela ukukhanya nokia ifoni
Uhlu lwemibuzo ukuthi empeleni ikhokhwe. Surveys Paid ku-intanethi. Uhlu lwemibuzo ikhokhwe
"TV" iqembu: umlando, umculo, izingoma
Jacket ebusika: yini ukukhetha?